ေKryvyi လာင္ရာေအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့Dnipropetrovsk - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
-အများအပြားအသုံးပြုသူသန်းမှတ်ပုံတင်ပြီးကြသည်အများအသိအကျွမ်းအဝင်အများအပြားနေထိုင်သူများ၏Krivoy မိ္သား။ ရှိလူအများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်၊ဘာသာတရားကို၊အသက်မွေးဝမ်း၊နှင့်အကျိုးစီးပွား။ သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေ၊မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်သူ၏တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် Kryvyi အလြန္မလိမ့်မယ်အစအဦးဖြစ်ပိုကြီးတစ်ခုခု၏။ ဒါဟာကောင်းစွာထင်-ထွက်မိတ်ဖက်ရှာတဲ့စနစ်ကြာသာအသင့်လျော်ပရိုဖိုင်းအပေါ်တောင်းဆို။ သင်လုပ်နိုင်သည်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အမှတ်အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာ၏နေအိမ်သို့အဘို့အချိန်းတွေ့အတွက်သင့်လျော်သောအပိုင်း-Kryvyi အလြန္မ-ပြပရိုဖိုင်းနှင့်ဒေသခံများ၏ဤမြို့။ အတူအလုပ်လုပ်တယ်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ရှု။ စာရင်းဇယားပြပွဲကြောင်းသုံးစွဲသူများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုအဘယ်သူသည်မှတ်ပုံတင်မပါဘဲအလုပ်နှင့်မွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါစိတ်ဝင်စားဖို့၊အလားအသိအကျွမ်း၊အမည် Kryvyi အလြန္မ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အောင်မြင်စွာ Krivoy Roge ပေါ်၊သင်ဖြစ်လာသင့်သအပြည့်အဝ-စုံအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ဒီထက်မပိုယူပါလိမ့်မယ်သုံးမိနစ်။ သငျသညျသှားပြီးနောက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ချိန်းတွေ့အတွက် Kryvyi အလြန္မများကြီးယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တွေ့လိမ့်မည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူဖော်ရွေရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အကူအညီအပိုင်း။ အားဖြင့်ဖြာ၏တစ်ဖွဲ့လုံးအစုံမြန်မာဘာသာကိုသတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသက်အရွယ်၊ပြင်ပဒေတာ၊ဝိသေသလက္ခဏာများ၊စသည်တို့ကို။၊ ရှိပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တဖန်အတွက်စစ်တမ်းများနိုင်သူလူများ၏အလားအလာအကျိုးစီးပွား။ အကယ်။၊ပြီးနောက်တစ်ချက်တင်စကားပြောဆို၊သင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆက်လက်သင်၏အကျွမ်းပြင်ပအင်တာနက်ကိုစီစဉ်တဲ့အစည်းအဝေး၏မြို့အတွက် Kryvyiလာင္ရာေ၊သင်လိုအပ်ရှာဖွေရန်အတွက်သင့်လျော်သောနေရာအဘို့အပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး။
ေျဖဂန္ရွေးချယ်မှု-စားသောက်ဆိုင်၊က၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့အရက်စွဲ၊သငျသညျတွေ့ဆုံရန်အတွက်လှပတဲ့လှေ၊ဓာတ်ပုံတပုံဖြစ်သည့်အတွက်မည်သည့်အစုအနီး Kryvyi လာင္ရာေ၊သို့မဟုတ်နံရံပေါ်အ Taras Shevchenko။ သွားလေရာရာ၌သင်ဖြည့်ဆည်းသေချာပါစေသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းအဆိုးဝါးကျွမ်းမှုတို့ကိုများပြားစေ။.
Kde se Můžete setkat V Tel Avivu - Jaffa Noví
လိင်ပျော်စရာဗီဒီယိုအခမဲ့ ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ နှစ် အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် အထီးကျန်ဆန်ချင်။ ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့် ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ၾကာင္း ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများအခမဲ့အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်း၊အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့် ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ငါလိုအ